Mariga: Waan Ka Tagayaa Inter
HomeAfricaMariga: Waan Ka Tagayaa Inter
Xidiga khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Kenya iyo naadiga Inter Milan ee McDonald Mariga ayaa daboolka ka qaaday inuu xagaagan ka dhaqaaqayo oo meel kale uga ambabaxayo kooxda Talyaaniga ah.
Mariga oo dhaawac jilibka ka soo gaadhay dartii uga maqnaa kooxda lagu naanayso the Nerazzurri xili xiyaareedkii 2013/14 ayaa carabka ku adkeeyey inuu kala xulanayo kooxo badan oo dalabyo u soo dirsaday si uu ugu biiro.
“Lama sii joogayo Inter xili ciyaareedka dambe,” ayuu Mariga ku yidhi shabakada Goal.
“Waxaa isoo gaadhay dhawr dalab oo miiska ii saaran, laakiin wali go’aan kama gaadhin halkii aan uga wareegi lahaa. Wali waan kala xulanayaa talooyina waan urursanayaa, sida ugu dhaqsaha badan ayaanan go’aanka kama dambeysta ah u soo saari doonaa.”
Laacibkan khadka dhexe ayaa xulkiisa dib ugu soo noqday maalintii Axadii kadib markii uu laba sanno ka maqnaa , ciyaartaas oo qarankiisa Kenya ku garaacay xulka Comoros Islands 1-0, ciyaarta oo ka tirsanayd isreeb reebka koobka Qaramada qaarada Afrika ee 2015.
Villarreal Oo Ay Faro Cididood Kaga Baxsatay Barcelona
Benítez: “Waxa nalagu beegay kooxdii ugu adkayd”
Juventus iyo Vallencia oo Afka Ciida Loo Daray – Kulamaddii Caawa ee Europa League